Arkaana Iimaanaa-5ffaa Archives - Page 2 of 3 - Ibsaa Jireenyaa
December 29, 2018 Sammubani Leave a comment
December 27, 2018 Sammubani One comment
December 22, 2018 Sammubani One comment
Barruu “Aakhiratti amanuu” yommuu ilaallu Azaaba fi qananii qabrii ilaalle turre. Azaabni fi qananiin qabrii dhugaa akka ta’e ragaalee Qur’aanaa fi hadiisa irraa dhiyeessinee turre. Azaabni fi qananiin qabrii wanta geeybi irraa waan ta’eef nafseen /ruuhiin nama du’e qofti akka beektu fi namoonni biroo ijaan arguu akka hin dandeenye kaasne jirra. Namoonni gariin wanta ijaan hin mul’annee (geeybi) kana ijaan arguu yommuu barbaadan, qabrii banuun yaalan. Garuu azaaba fi qananii qabrii jedhame hin argine. “Qabrii bal’attuu fi dhiphattu hin argine, qaamni nama du’ee akkuma duraatti jira. Meeti ree azaabni qabrii?” Kana bu’uura godhachuun azaabni fi qananiin qabrii hin jiru jechuun ofillee dhamaasanii namallee dhamaasu. Har’a In sha Allah shakkii fi dhama’iinsa kana saaquf ni yaalla.
December 8, 2018 Sammubani Leave a comment
Addunyaan tuni iddoo qormaataa haqni guutuun keessatti hin mirkanoofnedha. Eenyullee taanan haqa guutuu addunyaa tana keessatti nan argadha jedhee osoo carraaqe, haqa guutuu hin argatu.Sababni isaas, gufuwwan baay’een wanta kana akka hin hojjanne isa taasisu. Fkn, mootummaan abbaa irree tokko namoota kumaatamatti lakkaawaman ni ajjeessa. Mootummaan abbaa irree kuni osoo mana murtiitti haqaaf hin dhiyaatin ni du’a. Kanaafu, warroonni mirgi isaanii sarbame osoo haqa guutuu hin argatin addunyaa irraa boqotanii jiru jechuudha. Garuu gaafin kuni sammuu namaa qaxxaamura:“Rabbiin (subhaanahu wa ta’aalaa) namoota uumee osoo haqa guutuu isaaniif hin kennin akkanumatti ni dhiisaa? Zaalimman (cunqursitoonni) akkanumatti badanii ni hafuu?” Deebiin isaa “Rabbiin Mootii haqaa waan ta’eef namoonni yommuu akkanatti wal miidhan haqaan isaan jidduutti osoo hin murteessin hin dhiisu. Guyyaan Murtii kunis Guyyaa Qiyaamaa ta’a.” Kanaafu, namoonni murtiif lamuu kaafamu qabu jechuudha. Kutaa darbe keessatti yaadota sobaa warri Qiyaamaa kijibsiisu itti fayyadamu deebii isaa waliin ilaalle turre. Har’as yaadota hafan ni ilaalla.